प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - सिचुआन जियांगवायू पावर लाइन कम्पोनेन्ट्स कं, लिमिटेड
किन तपाइँको कम्पनी छनौट गर्दछ?
पहिलो मान्छे हो। हामी एक धेरै पेशेवर टीम र यस उद्योग मा अनुभवी ईन्जिनियरहरूको एक समूह हो। हाम्रो हाकिमले युकेमा आफ्नो डिग्री पायो जसले यस कम्पनीलाई अन्य टावर निर्माणकर्ताहरू भन्दा बढि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण ल्याउँदछ। दोस्रो, सेवा हो, यस उत्पादको लागि, निर्माता र ग्राहकहरूले धेरै प्राविधिक विवरणहरू छलफल गर्न आवश्यक छ। हामी जहिले पनि कुनै प्रश्न सोध्नु र ग्राहकहरुलाई हाम्रो पेशेवर सल्लाह दिन धैर्य छौं। अन्तिम तर कम्तिमा होइन, हामी गुणलाई धेरै मूल्य दिन्छौं। ग्राहकहरूको हरेक आवश्यकताको पूर्ति हुनेछ र हामी हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय उत्पादनहरू उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौं।
एक टावर कति छ？
मूल्य तपाईलाई कस्तो प्रकारको टावरहरू चाहिन्छ। बिभिन्न टावर प्रकारका लागि, कच्चा माल फरक हुन सक्छ र केहि टावर प्रकारको बनावट कार्य अरु भन्दा जटिल हुन सक्छ। हामीले ग्राहकहरूको रेखाचित्र हेर्नको लागि उद्धरण दिन आवश्यक छ।
मसँग कुनै चित्र छैन भने नि?
यदि ग्राहकहरूसँग चित्र छैन भने हामी ग्राहकहरू छनौट गर्न धेरै डिजाइन गरिएको टावर प्रकारहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं। धेरै जसो अवस्थाहरूमा हामी ग्राहकहरूको आवश्यकता पूरा गर्न उचित टावर प्रकारको रेखाचित्रको प्रस्ताव गर्न सक्छौं। यदि प्रसारण लाइन जटिल छ भने, हामी अझै पनि हाम्रो ग्राहकहरूको लागि डिजाइन सेवा प्रस्ताव गर्दछौं।
न्यूनतम अर्डर के हो?
हामीसँग न्यूनतम आदेश छैन र हामी ग्राहकहरूबाट कुनै आदेश स्वीकार गर्दछौं।
उत्पादन कति लामो छ?
सामान्यतया हामी एक महिनामा पहिलो ढुवानी गर्न सक्छौं। उत्पादन समय तपाईलाई कति टावरहरू चाहिन्छ वास्तवमा भर पर्दछ।
ढुवानी दिन कति हो?
युरोप, अफ्रिका र अमेरिका महादेशमा डेलिभरी समय करीव days० दिनहरू हुन्छ। ASEN का राज्यहरूमा, डेलिभरी समय करीव days० दिनहरू हुन्छ। सामान्यतया भन्नुपर्दा, डेलिभरी समय एक महिना भन्दा लामो हुनेछ।
के ग्राहकले ढुवानी अघि उनीहरूको उत्पादनहरूको निरीक्षण गर्न सक्दछन्?
हो, पक्कै पनि। ग्राहकले उनीहरूको उत्पादनहरूलाई उनीहरूले चाहेको कुनै पनि समयमा निरीक्षण गर्न सक्दछ। वास्तवमा, हामी हाम्रो कारखाना भ्रमण र ढुवानी अघि उनीहरूको उत्पादनहरू निरीक्षण गर्न ग्राहकहरूलाई स्वागत गर्दछौं। हामी clients ग्राहकहरु days दिनको आवास प्रदान गर्नेछौं। व्यवस्थापन हामीलाई भेट्न जो ग्राहकहरु संग एक बैठक हुनेछ। उत्पादनहरूको कुनै पनि निरीक्षण जुन ग्राहकलाई आवश्यक पर्दछ।
तपाईंको बिक्री पछि नीति के हो?
सामान्यतया, हामी टावरहरू राम्रोसँग जम्मा नगरेसम्म ग्राहकलाई मद्दत गर्न सक्ने कुनै पनि सेवा प्रदान गर्नेछौं।
तपाइँको भुक्तानी अवधि के हो?
सामान्यतया हामी T / T र L / C, ०% अग्रिममा स्वीकार गर्दछौं।